Ab intio study of co - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: ab intio study of coal structures (Englisch - Burmesisch)
the study of covs in bats and other animals has drastically changed our perception of the importance of zoonotic origins and animal reservoirs of hcovs in human transmission.
လင်းနို့များနှင့် အခြားတိရစ္ဆာန်များရှိ covs လေ့လာမှုသည် လူသား၌ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအတွင်း တိရစ္ဆာန်မှတဆင့် မူလရင်းမြစ်ကူးစက်မှုများနှင့် hcovs ရောဂါလက်ခံထားရာ တိရစ္ဆာန်များ၏ အရေးကြီးမှုအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ သိမြင်နားလည်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။
မိသားစုတစ်စုနှင့် ရောဂါလက္ခဏာမပြသူတစ်ဦးထံမှ ထပ်ဆင့်ကူးစက်ခြင်းခံထားရသည့် အုပ်စုတစ်စုတို့အပေါ် မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှု နှစ်ခုတွင်လည်း အလားတူ အခြေအနေမျိုးကို တွေ့ရှိရကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ကုန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါ မီးခဲပုံကို၎င်း၊ ကင်ထားသောငါးကို၎င်း၊ မုန့်ကို၎င်းတွေ့မြင်ကြ၏။
&quot;one study of lopinavir/ritonavir (kaletra),acombination of the antivirals lopinavir and ritonavir, concluded that &quot;&quot;no benefit was observed&quot;&quot;.&quot;
ပဋိဇီဝဆေးနှင့်ဆိုင်သော ရီထရိုဗိုင်းရပ်စ် သတ်ဆေး (lopinavir)/hiv/aids ကုသဆေး (ritonavir) တို့ကို ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည့် ရီထရိုဗိုင်းရပ်စ် သတ်ဆေး (lopinavir)/hiv/aids ကုသဆေး (ritonavir) (ကေးလ်ထရာ) လေ့လာမှုတစ်ခုသည် “အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရှိရပါ” ဟု အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါသည်။
the studies of chloroquine and hydroxychloroquine with or without azithromycin have major limitations that have prevented the medical community from embracing these therapies without further study.oseltamivir does not inhibit sars-cov-2 in vitro and has no known role in covid-19 treatment.
အေဇီသရိုမိုင်စင် ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ ကလိုရိုကွင်းနှင့် ဟိုက်ဒရောက်ဆီကလိုရိုကွင်းတို့ အပေါ် လေ့လာမှုများတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းကို နောက်ထပ်လေ့လာမှု မရှိဘဲ ယင်း ကုထုံးများကို ဆက်လုပ်ရန် တားဆီးထားသော အဓိက အကန့်အသတ်များ ရှိနေသည်။ အိုဆယ်တာမီဗာသည် အပြင်အပတွင် sars-cov-2 ကို ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိပဲ covid-19 ကုသမှုတွင် မည်သည့် အခန်းက ပါဝင်သည်ကို မသိရပေ။
ထိုကာလ၌ ချမ်းသောကြောင့် ကျွန်များနှင့်မင်းလုလင်များတို့သည် မီးခဲပုံကိုထည့်၍ မီးလှုံလျက် နေ ကြ၏။ ပေတရုသည်လည်း သူတို့နှင့်တကွရပ်၍ မီးလှုံလျက်နေ၏။
guyon (Deutsch>Spanisch)stieples (Lettisch>Estnisch)it is finished (Englisch>Italienisch)ora pro nobis pecatoribus (Latein>Englisch)postcoital (Englisch>Norwegisch)queria cheirar seu cabelo (Portugiesisch>Englisch)ear kudaichal (Tamilisch>Englisch)too good to be true (Englisch>Malaysisch)address with poscode (Englisch>Malaysisch)yeh house rent pe dena hai (Hindi>Englisch)hiragana (Finnisch>Englisch)a que horas você vai chegar (Portugiesisch>Englisch)diin basa (Tagalog>Englisch)nilai nilai murni (Malaysisch>Chinesisch (Vereinfacht))Γεια σου φίλος μου (Griechisch>Deutsch)protinus inde (Latein>Französisch)come ti trovi in italia (Italienisch>Englisch)他只是说所有的褫夺法国籍案例 (Chinesisch (Vereinfacht)>Malaysisch)geneticamente selezionato (Italienisch>Englisch)writeaessay in afrikaans about music is my life (Afrikaans>Englisch)oynuyor musun? (Türkisch>Englisch)ordinari (Italienisch>Englisch)arts (Englisch>Tamilisch)cuando vuelvesahamura (Spanisch>Englisch)laje de subpressão (Portugiesisch>Englisch)